Cryptocurrency musika budiriro iri 2018 - Blockchain News
Nokuda kushanda bitcoin neramangwana uye nomukaka pamusoro chinyakare wemari exchanges; pokugadzwa anodarika 100 ruzhowa mari kuti kuchinjanisa cryptocurrencies; uye cryptocurrency musika capitalization richisvika kupfuura $500 mabhiriyoni 2017, Nyanzvi zvakarurama tenda kuti magetsi cryptomarket kwazova kukurumidza kuwedzera uye zvinovimbisa kupfuura indasitiri nezera redu. Tava vakaungana maonero uye zvakafanotaurwa nyanzvi uye kiyi indasitiri vatambi pamusoro cryptocurrency pamusika kukura mune 2018.
The CEO pamusoro Node40, mumwe blockchain utungamiriri uye cryptocurrency mutero kutevedzera kambani, Perry Woodin anodavira kuti 2018 richava gore gobvu voruzhinji ruzivo kuti cryptocurrency.
Kuenda kuva gore apo shamwari ose uye hama achada kuziva zvakadini zvaunazvo uye sei kuti vatenge nayo, anoti Woodin.
Hapana mubvunzo pachava kuwedzera kwenhamba yevanhu vachishandisa cryptocurrencies. Jonathan Sela, SVP mabhizimisi Kugadzirwa zvokushandisa kubudikidza YouNow, iyo inoshandisa blockchain kuvaka vezvenhau mararamiro, inofungidzira kuti pakazopera 2018, tichaona pamusoro 50 mamiriyoni evanhu munyika yose muchiva kanenge imwe cryptocurrency. Nepo tsvakurudzo itsva ne London Block Exchange (LBX) chinoguma kuti pakazopera 2018 mumwe millennials matatu achaita paakapiwa kupinda musika crypto.
Chisarudzo tsika wemari exchanges CBOE uye CME kunyora bitcoin neramangwana uye nzira zvibvumirano akaita cryptocurrency kwenyika rokutanga uye, zvichida nokukurumidza, dzimwe cryptocurrencies, mutsva twa kirasi zvakafanana zvinokosha simbi, simba pfuma, hurumende zvisungo, uye nezvimwe zvinhu uye kuchengetedzeka zhinji. saka, gore rinouya nzvimbo cryptocurrencies zvichava zvikuru pamutemo muna raivapo dzemari uye zviri pamutemo hurongwa. Simon Yu, CEO pamusoro StormX, mugove mashoko aya. Ndiye chokwadi kuti 2018 achava mumwe makore zvakanakisisa cryptocurrency uye kusunda kumusika kuvandudza.
Kusvikira zvino yave anonyanya chitoro vanoita kukuvadza mari bitcoin nezvimwe cryptocurrencies. Ane neramangwana pamusika uye nzira yekuzvidzivirira Profile, zvakawanda zvechechi vanoita pakupedzisira kukwanisa kutanga vachisvetuka. Asi vaine zviridzwa zvemari, tinogona kuona dzakazadza madhora zvechechi mari aibuda mune pamusoro mashomanana akatevera.
Shidan Gouran, Purezidhendi Global Blockchain Technologies, haana mubvunzo kuti cryptocurrency achaona zvikuru zvakakwaniswa kuitwa pamusoro jengachenga mu 2018.
“Nepo chikamu chinokosha mutengi vanacho kana kushandisa kana, dai wango, achinyatsoita cryptocurrencies, chete havagoni asi kutaurwa nehurumende nemasangano. Izvi zvinofanira kutarisirwa, sezvo masangano, zvose paruzhinji uye pasiri, vanowanzotevedzera kuva yakareba makakombama pakudzidza wakagona michina mitsva. Tikaona kuti munyonga ichi kudzidza kuchava rainyanya kukosha cryptocurrency uye blockchain kuitika 2018, nokukurira vazhinji nezvipingamupinyi kwakatadzisa paruzhinji uye masangano munyaya nzvimbo iyi. Izvi zvichazorodza vose vapinde peji chete, tichipfumisa zvikuru zvingakwanisa ruzivo ava kutora chikamu zvikuru masangano, anokiyinura functionality kuti zvaisazova zvichikwanisika zvimwe. Pakati akaramba zvechechi inivhesitimendi mu cryptocurrencies, chipo bitcoin anotsanangura neramangwana, uye hurumende kutanga kushanda kwavo blockchain muzvirongwa, pane kare zviratidzo ruzivo izvi ndibate pane kuruzhinji uye masangano mumatunhu. isu, saka, kufanoona kuti 2018 vachaona kuramba kukura uye wokugamuchirwa, kuvaka pamusoro huripo mberi musi kugamuchira wekuongorora itsva”.
Maererano CEO pamusoro Biddable Mark Lurie, vanoita vazhinji omerera dzimwe cryptocurrencies, kusanganisira litecoin, nokuputsanya, uye vara, pane bitcoin kana Eteri. Lurie anotenda kuti bhizimisi, mu 2018, pane kuenda kuva achapesana akananga diversifying cryptoassets uye crypto mari zvakanaka simba richashandiswa sei nzira vanoita kutarira zvetsika zvinhu uye bhizimisi.
Mike danda, CEO of Crypto Company, akacherechedza kuti zvishoma volatility muna Bitcoin dai kufurira pamusoro nzira cryptocurrencies uye tinoda kuona kuwedzera kuchengetedzeka zviratidzo. Anofungidzira pamusika chivharo kubva $5 tiririyoni pakazopera gore.
dmitriy Zhulin, Co-muvambi dzi mararamiro, anotarisira kuti sezvo blockchain zvemichina mberi kuumba, bitcoin vanozokura anenge $30-40,000 mu 2018 kwakavakirwa kwayo kurerukirwa uye mimwe wokugamuchirwa senzira muripo uye guta Kuchengetedzwa. Uyezve, Trevor Koverko, Mutungamiri Canadian Polymath kambani, anotenda kuti Bitcoin wanyatsonzwisisa sezvo muripo Network.
“Pari Bitcoin ari kushandiswa senzira dzokufungidzira twa uye dura ukoshi. Asi sezvo scaling zvinogadzirisa sezvinoita mheni Network buda ( Bitcoin anotsanangura Network, unobvumira vanoishandisa kuita risingaperi uwandu micropayments - DeCenter), bitcoin kwakaita utility zvinoshamisa kuwedzera pamwe mutengo wayo. Mubvunzo chaiwo ndewokuti zvichaita kuti bitcoin 'chikuru cheni’ kuti ane ushingi kushandisa upgrades izvi kana hakuzoviwo mumwe cheni kufanana Bitcoin Cash?”
Cryptocurrency musika budiriro
Teregiramu anoronga mul ...
Next Post:blockchain zvemichina sei munguva 2018?